Taariikh Nololeedka Mustaf, Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya |
Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa yeelatay madaxweyne cusub arbacadii kadib is-casilaaddii Cabdi Iley August 6, 2018.
Golaha dhexe ee xisbiga dimoqradaadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa Mustafe Muxumed Cumar si KMG ah ugu doortay inuu noqdo Madaxweynaha DDSI, isagoo xilkaas sii heynaya illaa doorasho dambe.
Haddaba, Halkan Ka Akhriso, Taarikh Nololeedka Madaxweyne Mustaf Muxumed:
Mustaf Muxumed Cumar waxaa uu ku dhashay magaalada Dhagaxbuur 1973-dii, waa dhaqaale-yahan shahaadada Masterka ka heysta cilmiga Science, waxaa uu leeyahay khibrad ilaa 23 sano ah.
Mustaf, waxaa uu la soo shaqeeyay hey’ado badan oo ay ka mid yihiin: Qaramada Midoobey, Save the Children iyo dowladda Itoobiya.
Madaxweynaha cusub ee Ee Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustaf waxaa kale oo khibrad u leeyahay arrimaha banii’aadnimada, cuntada iyo qorsheynta.
Hey’adda Qaramada Midoobey waxaa uu kala shaqeeyey arrimaha banii’aadanimada, isaga oo ka shaqeeyay dalal ay ka mid yihiin Zimbabwe, Kenya, Soomaaliya, Imaaraadka, hadda marka la magacaabayey waxaa uu ahaa la-taliyaha xafiiska isku-duwaha Qaramada Midoobey ee arrimaha banii’aadnimada ee Soomaaliya.
Dad aqoon gaar ah u leh, oo goobjoog News la hadlay waxaa ay sheegeen in Mustaf Muxumed uu yahay shakhsi karti leh, aqoon leh, fahamsan baahida gobolka isla markaana dagaal u galay inuu isbadal ka dhaco Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Cabdi maxamuud cumar, oo ahaa nin ay Tigreega u adeegtaan ayaa muddo ka talinayey Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya isaga oo sameystay ciidamo u daacad ah, oo dhibaato isugu jirta dil, dhac, kufsi, barakicin xoog ah iyo bah-dilaad ku hayey bulshada Soomaaliyeed ee ku nool halkaasi.